सिनेकर्मीलाई हेर्ने नजर विस्तारै फेरिदैछ
नेपाली सिनेमा क्षेत्र क्रमिक रुपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ । अहिले टोल–टोलमै सिनेमा बस्ने स्थिति छ । संख्यामा धेरै सिनेमा बनेपनि भ्यालु भने अलि कम भएको महसुस हुन थालेको छ । पहिला हल भएका ठाउँमा २५ प्रति...
सवैभन्दा पछि जन्म भएको प्रदेश नं. ६ ले सवैभन्दा पहिला प्रदेशको स्थायी नाम (कर्णाली) र केन्द्र (सुर्खेतको बीरेन्द्रनगर) तोकेको छ । यो प्रदेश नक्साको हिसावले चीनसँग सिमाना जोडिएको भएपनि ब्यबहारमा भुपरिव...
आधुनिक नेपालको राजनीतिक परिर्वतनको इतिहास अध्ययन गर्दा नेपालमा भएका ठुला ठुला फेरबदलहरु विशेषगरि सत्ता प्राप्त गर्ने उदेश्यले केन्द्रीत भएर नै भएका हुन भनेर निश्कर्ष निकाल्दा असान्दर्भिक नहोला । जहाँन...
नेकपा एमालेको नवौं महाधिबेशनले सामान्तवाद सकिएको र पुँजीवादको औपचारिक जन्म भएको राजनैतिक दस्ताबेज पारित गर्यो । सामन्तवादको नेतृत्व गरिरहेको राजतन्त्रको विधिवत समाप्तीलाई देखेका कार्यकर्ताले बिना प्रत...
चिनिया क्रान्तिका नायक तथा आधुनिक चीनका महानायकः तङ स्याओफिंग
आधुनिक चीनका निर्माता तङ स्याओफिंगको जन्म सन् १९०४ मा चीनको सछुवान प्रान्तस्थित क्वाङआन गाउँमा भएको थियो । उनी मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएका थिए । उनका बाबु तङ वनमिङले सछुवान प्रान्तको सदरमुकाम ...
दलित युवक र गैरदलित युवतीवीचको विवाहभन्दा दलित युवती र गैरदलित युवकवीचको विवाह कमै हुने गर्दछ । कारण दलितले गैरदलित युवतीलाई जति सजिलो गरी अपनाउछ, दलित युवतीलाई गैरदलित परिवारमा सहज छैन । जवकि शारिरीक...
जनतामार्फत बहुमत पाएको ओली सरकारले संसदबाट दुईतिहाईको शक्ति आर्जन गर्न महत्वपूर्ण समय खर्च गर्‍यो । पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलनमा आउँदै गरेको स्वभाविक परिवर्तनले दुईतिहाई प्राप्त प्रधानमन्त्री ओली आफ...
निकृष्ठ प्रकृतिका सुन्दै अत्यास लाग्ने घटना भइरहँदा जनप्रतिनिधि किन् मौन ? वि.स. २०७४ साल नेपालको लागि निर्वाचन वर्षको रुपमा परिचित भयो भन्दा फरक पदैन । गत बैशाखको ३१ गते स्थानीय तहको पहिलो चरणको नि...
समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आवश्यक वास्तवमा ठूलो सपनाका साथ नेपाली जनताले पहिलो पटक कम्युनिष्टलाई दुई तिहाई बहुमत नजिक पुर्याए । सरकार संचालनको म्याण्डेट वाम गठबन्धनलाई दिए । तीन चौथाइ सांस...
आमुख नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घले फागुन १५ गते प्रेस विज्ञप्तिद्वारा नेपालको राजधानीमा अवस्थित सैनिक मञ्चमा फागुन २६ गते अर्थात् मार्च १० मा आयोजना गरिएको भारतीय अभिन...
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस सुरु भएको सय वर्ष बितिसक्दा आजको विश्व महिलाका निम्ति कति अनुकूल र कति प्रतिकूल छ, समीक्षाको विषय बनेको छ । महिलाको प्रतिस्पर्धात्मक सहभागिता, समानता, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरत...
एउट कालखण्ड थियो त्यो बेला समाजमा मातृ सत्ता थियो । (देविदेवताको काल ) श्रम विभाजन र निजि सम्पतीको थालनीसंगै क्रमश मातृ सत्ताको ठाउँ पितृ सत्ताले लियो । पितृ सत्ताले महिला जैविक हिसावले कमजोर हुँने ...
हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि अंगे्रजी महिना मार्च र नेपाली महिना फाल्गुन महिला बर्ष दिवस जस्तै रङ्गिन हुने गर्छ । महिला समानता, नागरिक हक, मतदानको हक, समान ज्यालाको हक, समान अस्त्त्विको हक लगायतका माग ...
धरैले प्रसंंसा गर्थे । काकी असाध्यै राम्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सुन्दरताको वर्णन गर्ने त कती थिए कती । काका सधै भन्ने गर्नूहुन्थ्यो लक्ष्मी त साह्रै राम्री छस् मलाई केही भएपनी त अर्को बिहे नगर्नु । क...
विश्वभर मार्च ८ मा १०८ औ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस “प्रगतिका लागि दवाव” (press for progress) भन्ने नाराका साथ मनाइदैछ । महिला दिवस मनाउनुको उदेश्य मुलतः समाजमा देखिएको लैगिक बिभेदको अन्त्य गर्न...